Qaabka loogu galmoodo marka xaaskaaga uur leedahay iska fiiri marax yahow? - iftineducation.com
Qaabka loogu galmoodo marka xaaskaaga uur leedahay iska fiiri marax yahow?
iftineducation.com – Dad badan ayaa isweydiinaya in galmada oo lasmeyo Xiliga ay Haweenku Uurka leeyihiin aysan Fiicneyn Balse sidaa Mahan Xaalka oo wax dhibaato makeneyso,hadii haweneyda Uurka leh aysan Horay uga sheegan ariamahaan.
In Xabadka Kor u jeediso sida Caadiyan la adeegsado Laakiin waa in qeybta dambe ee Haweneyda ay sara u qaadaa oo Barkin ama wixii kale oo la heli karo la geliyo Waxaana Muhiim ah in ninku uusan Xooga u garaacin.
Gabar yahey saan isku dhaan ninkaaga sababahaan ayuu ku nacay galmada?